Taxi an-drenivohitra : Hatsaraina ny fomba fiasa -
AccueilSosialyTaxi an-drenivohitra : Hatsaraina ny fomba fiasa
Taxi an-drenivohitra : Hatsaraina ny fomba fiasa
12/09/2018 admintriatra Sosialy 0
Mba ahafahana mijery sy mitady vahaolana hanatsarana ny fomba fiasa eo amin’ny taxi eto an-drenivohitra dia hanatanteraka fivoriambe ny fikambanan’ny taxi Antananarivo Renivohitra amin’ny alakamisy 13 septambra izao eny Ankorondrano. Maro ny ezaka efa natao ary mila hamafisina mba hanatrarana ny tanjona napetraky ny fikambanana, hoy ny filohan’ny FTAR, Rahanirinina Clémence. Isan’izany ny ady amin’ny Omavet, ny fampidinana ny saran’ny fankatoavana, ny taxi mpijirika. “Tsipihina fa efa nentina teny amin’ireo mpitantana ny tanàna ireo olana mianjady fa manao be marenina”, hoy ny fanamarihan’i Raharinirina Clémence.
Ny zavatra hita sy tsikaritra tokoa, dia be tsy handraofana fotsiny ireo taxi satria tena efa ratsy ny ankamaroan’ireo fiarakaretsaka miasa eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao. Voakasik’izany ny kalitaon’ny fiara, ny motera, ny seza, ny fitaratra, ny fahadiovan’ny fiara, ny jiro ka lasa tandindonin-doza ny mpandeha amin’ireny fiarakaretsaka kitoatoa ireny. Ny vahaolana tsara indrindra, tokony tsy misy mahazo miasa ireo mivezivezy amin’izao fa manetroka eraka ny arabe, miteraka fitohanana. Izany hoe, fiara vaovao no hanaovana ny taxi.